YouTube: Sida Loo Siiyo Wakaaladdaada ama Sawir Qaadahaaga Isticmaalka Isticmaalka Kanaalkaaga | Martech Zone
Arbaco, Juun 14, 2021 Arbaco, Juun 14, 2021 Douglas Karr
Haddana mar labaad, waxaan la shaqeynayaa meherad ka tagaysa hay'ad oo ila shaqaysa wanaaji joogitaankooda YouTube… Iyo, haddana, hay'addii ay la shaqaynayeen waxay leedahay lahaanshaha akoonadooda oo dhan. Waxaan ka cabanayey hay'adaha tan sameeya in ka badan toban sano hadda waxaanan kula talinayaa ganacsiyada inaysan weligood sidan samayn. Mana aha in ganacsigu waligiis siinayo gelitaan iyo furaha sirta si loo maareeyo koonto kasta.
Habka ku habboon ee lagu qaban karo shaqo hay'ad kasta waa in la isticmaalo astaamaha meheradaha ee dhammaan meheradaha waaweyn, laga bilaabo diiwaangeliyeyaasha domain, martigaliyayaasha websaydhka, iyo kanaalada bulshada si loo siiyo hay'addaada helitaanka maareeyaha laakiin marnaba biil iyo helitaan lahaansho. Haddii aadan yeelin, mar walba waxaa jira fursad ah in wakaaladda iyo adiga aad isku dhacdaan oo ay adag tahay in dib loo helo lahaanshaha ama helitaanka wakaaladdaada xigta. Ama waxaa ka sii daran, wakaaladda ama la -taliyaha aad la shaqeyneyso wuu ka bixi karaa ganacsiga ama ma heli karo markaad u baahato. Ha halis gelin ganacsigaaga sidan oo kale!
Maanta, waxaan ku dhex marayaa sida loo siiyo gelitaanka wakaaladdaada ama sawir -qaadaha fiidiyahaaga YouTube -ka adiga oo ku daraya maareeyaha astaantaada Google.
Sida Loogu Kordhiyo Maareeye YouTube
Google waxay si tartiib tartiib ah u horumarinaysay isdhexgalka iyo xulashooyinka dhammaan adeegyadooda halkaasoo aad ku yeelan karto koonto sumadeed ka dibna ku darto isticmaaleyaasha koontadaas iyaga oo siinaya marin kooban. Faa'iidada tani waa mid fudud:
Ma bixinaysid logins muhiim ah iyo passwords oo aad ku tiirsanaato hay'addaada si aad u ilaaliso nabadgelyadooda.
Marna ma tihid bixinta lahaansho u dir wakaaladdaada, markaa wax dhib ah ma jiraan haddii aad go'aansato inaad baxdo. Waxaad si fudud u gashanaysaa oo aad meesha uga saari kartaa gelitaankooda maareeye ahaan.
Wakaaladdaadu waxay leedahay xaddidan helitaanka maareynta koontada, iyadoon marin loo helin astaamaha waa inaysan waligood yeelan sida biilasha, maamulka isticmaalaha, ama lahaanshaha.
Talaabooyinka Lagu Darayo Wakaalad ama Sawir Qaade Si Loo Maareeyo Kanaalkaaga YouTube
Open YouTube Studio oo guji goobaha hoose ee bidix.
Xullo Ogolaansho adiga Settings Liistada oo guji Maaree ogolaanshaha. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad gasho koontadaada halkan Google si uu u caddeeyo inaad adigu tahay milkiilaha.
Hadda waxaad ku jirtaa adiga faahfaahinta akoonka oo dooran kara maamul rukhsadaha adeegsadayaashaada.
Midigta kore, dhagsii astaanta Martiqaad Users Cusub.
Kudar Users cusub hadda waxay kuu sahlaysaa inaad ku darto cinwaanka emaylka iyo sidoo kale kaalintooda koontadaada. Taladayda hay'ad ama sawir qaade waxay noqon doontaa in lagu daro iyaga oo ah Tababaraha kooxda.
Taasi waa… hadda adeegsadahaagu wuxuu heli doonaa ogeysiis iimayl ah halkaas oo ay ku aqbali karaan kaalintooda oo ay bilaabi doonaan inay maareeyaan Kanaalkaaga YouTube!
Tags: ku dar youtube maareeyekoontada sumaddakoontada sumadda googlesida loomaamul rukhsadda youtubeyoutubeXisaabta YouTubeYouTube channelMaamulaha kanaalka YouTubesuuqgeynta youtubeOggolaanshaha YouTubeIsticmaalaha YouTubeOgolaanshaha isticmaalaha YouTube
Muxuu Yahay Maareynta Tag Tag? Maxay Tahay Inaad U Hirgeliso Maareynta Tag?